Vanofara Valentines: 13,000 matani emaruva akatumirwa kuEcuador
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Vanofara Valentines: 13,000 matani emaruva akatumirwa kuEcuador
Airlines • Kuputsa Nhau dzeEcuador • Colombia Breaking News • nhau • Press zvinoburitswa • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
VaColombia vakadanana neEcuador uye LATAM Boka rakakwanisa kuuya kuzonunura
LATAM Cargo Boka raive nebasa rakanaka mukati megore ra2021 reValentine's Day, iro, pamwe chete neZuva raAmai (Kubvumbi naMay) rinomiririra kukwirisa kwebasa nyowani rekutumira maruva. Muna 2021, kambani yakatakura 7% mamwe maruva kupfuura muna 2020, inokwana anopfuura matani 13,200.
Iwo manhamba akanaka ari kukonzerwa nekusavhiringidzwa kweLATAM Group muColombia neEcuador, kunyangwe paine dambudziko hombe rinounzwa nedenda re COVID-19 maererano nekwanisi. Muchokwadi, iro Boka rakawedzera mupiro waro wepamhepo kuzadzisa zvido zvevatengi varo - mune ino varimi vemaruva- vanovimba nekubatana uye kunze kwenyika kusimudzira mabhizinesi avo.
Semuenzaniso, mumwaka wakatanga mavhiki matatu zuva raValentine risati rasvika –January 18 kusvika Kukadzi 09- LATAM Boka rakatora kanokwana ka225 kubva kuBogota, Medellin neQuito nemaruva avo akawanda, maruva ekumwaya, alstroemeria nemagerberas ekuColombia, nemaruva , gypsophila uye alstroemeria kubva kuEcuador kuenda kuUnited States.
Miami ndiyo inonyanya kuenda kunzvimbo yemaruva matsva uye iri zvakare imwe yemahombekombe makuru epasirese uye imba kumabasa ekutakura zvinhu eLATAM Airlines Group. Kubva pano, maruva anogoverwa zvakanyanya akananga kuNorth America neEurope.
Inofananidzwa nenguva yakajairwa, muColombia kambani yakatakura mamwe matani manomwe muzana pasvondo panguva yezuva reValentine, ichibudirira kushandira chinodikanwa kubva kubazi remaruva.
MuQuito, Ecuador, chinzvimbo chakawedzerwa kutakura kugadzirwa kwemaruva kuenda kuMiami, ichiwedzera huwandu hwematani anotakurwa vhiki rega rega ne7%, nekusimudza hunyanzvi kuenda kuAmsterdam (The Netherlands), nzvimbo yechipiri yemaruva eEcuador.
“Panguva dzekutambudzika sezvakaita denda razvino ndipo pakaratidzwa kuzvipira kwedu kune vatengi vedu. Kwete chete isu tinopa yakanakisa yekufambisa sarudzo nekuisa pekutanga kushandiswa kwese-nhumbi nendege uye nekuwedzera ndege dzevatakuri kutakura maruva chete. Tawedzerawo mafizikisi matsva ekutora maruva matsva kubva kuColombia neEcuador kuenda nenyika, nekudaro tichitsigira mabhizinesi evatengi vedu, ”akadaro Claudio Torres, Commercial Mutevedzeri weMutungamiri weSouth America kuLATAM Cargo Group.
Nepo maruva achigadzirwa munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, muColombia mudunhu reCundinamarca padhuze neBogota inosvika 76% yeizvi zvinoparara, zvichiteverwa neAntioquia ine 24%.
MuEcuador, nzvimbo dzinogadzira dzakanyanya ndeyePichincha uye iyo yepakati-Andean dunhu reCotopaxi.
Vakadzivirirwa Zvizere maAmerican Vakaudzwa Kupfeka Masiki Masiki ...
Delta musiyano unopararira muHawaii sevane 30,000 vafambi ...
Nyowani CEO Anotora Helm KuVail Resorts
Shanyira Maldives neRubatsiro rweVaccination Webhusaiti
IMEX America Smart Muvhuro keynotes tarisa chiremba ...
Princess Cruises Australia: Haisisiri kuenda pasi pasi ...
Ndiani anoda chipo chemabhiriyoni emadhora eCOVID-1 ...
137 vashanyi veRussia vanoparadzaniswa muCuba mushure mekuyedzwa ...
Hawaii COVID-19 Zvirwere: Imwe Rekodhi Yakakwira Mushure ...
Ndege dzeRussia dzakaburitsa kuti dziendese ndege kuRed Sea ...
Iyo Zera reZero-Emission Aviation Startups
Spanish Canary Islands iri kugadzirira kuuya ...
Citizenship neInvestment iri kuenda yakaipa?
Ndege yevatakuri yakadonhera muPacific Ocean apo ...
Seychelles Munyori Mukuru Wekushanya anopa ...
Yakareba COVID: Maitiro eCzech Tourism ari Kuita Nezvinokuvadza ...
Kenya Inonongedza Tourism yeAfrica Kudzikisa COVID-19 ...
Hawaiian Airlines ichibuda yakasimba kubva kuCOVID-19 ...
Cyprus Inoita Yevhiki nevhiki COVID-19 Miedzo Inosungirwa Kune Vese ...
Favorites inosanganisira Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara ...
Kufamba neKushanya vanobata zviitiko kumusoro 39.6% muna Chikumi
Kudengenyeka kwenyika kuHaiti kwakauraya vanopfuura mazana gumi nemana
Lagardère Kufamba Retail uye Lima Airport Vashandi ...
Nyowani COVID-19 antibody bvunzo bvunzo imwe chete inoda kamwe chete pa6 ...
UK kubvisa zviyero zvinotenderwa zvePCR zvekubaiwa jekiseni ...
Allegiant inozivisa nzira nyowani 23 dzisiri dzakamira
Isu vanhu tinopemberera Chikunguru 4, 2021